भारतले अवरु’द्ध गरेको स्थानमा पहाड फो’डेर सडक बनाउदै नेपाली सेना । – Yuwa Aawaj
भारतले अवरु’द्ध गरेको स्थानमा पहाड फो’डेर सडक बनाउदै नेपाली सेना ।
चैत्र ३०, २०७७ सोमबार 320
नेपाली सेनाले घाँटीबगर इलाकामा कडाचट्टा’न रहेको भीरमा ४६० मिटर गोरेटो बाटो निर्माण गरेको छ।यही भदौ मसान्तभित्रै ५५० मिटर उक्त गोरेटो बाटोको ट्य’याक खोलिसक्ने सेनाको तयारी छ ।
भारतले सडक निर्माणका क्रममा अ’वरुद्ध रहेको घाँटीबगर क्षेत्रमा बाटो ’अवरु’द्धहुँदा व्यासको छांगरु र तिं’करका बासिन्दालाई आवतजावत गर्न स’मस्या थियो । यता : गत आर्थिक वर्षमा मुख्य सडकमा निर्माणको काममा जोड दिएको
डिभिजन सडक कार्यालयले चालू आवमा च’क्रपथ बाहिरको सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । चालू आवमा २० किमी सडक निर्माण सकिएको डिभिजनले जनाएको छ ।काठमाडौँ जिल्लाबाट अरु जिल्लासम्म जोडिने स्थानमा पनि निर्माणको काम भइरहेको छ ।
तीमध्ये कतिपय नयाँ निर्माण र कतिपय पुनःस्थापनाको काम भएको कार्यालयले जनाएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला नजिकै पर्ने भो’टेचौर, ज’र्सिङपौवामा सडक निर्माण भइरहेको कार्यालयका प्रमुख कुबेर नेपालीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिले काभ्रे’स्थली जाने सडकको निर्माण भइरहेको छ । चक्रपथ बाहिरका क्षत्रेमा बूढानीलकण्ठबाट डाडाँगाउँ, भङ्गाल र कपन क्षेत्रमा भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यीमध्ये धेरै ठाउँमा नयाँ बनाउने नै काम भइरहेको छ ।”
चालू आवमा नै बूढानीलकण्ठ सडकको पुनःस्थापनाको गरिने उहाँले बताउनुभयो । यो सडकमा अहिले नेपाल विद्युत् प्रा’धिकरणले विद्युतीय तार भू’मिगत गरिरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्राधिकरणले तार भूमि’गत गरेर खाल्टा टालेपछि त्यहाँ निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।”
गत आवमा काठमाडौँका मुख्य सडकमा निर्माण वा मर्मतको काम भएकामा चालू आवमा चक्रपथ बाहिर काम बढी भएको देख्न सकिन्छ । मुख्य सडकमा पनि गत आवमा बाँकी ठाउँमा ‘ओभर ले’ गरिने प्रमुख नेपालीले बताउनुभयो ।
अहिले निर्माणको काम भइरहेको सड’कमा दोहो\_रोपना नआयोस् भनेर अरु निकायसँग समन्वयमा काम गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
सडक बनाएपछि खन्न न’परोस् भनेर अरु निकायसँगको समन्वयमा काम अघि बढाइएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “चक्रपथ बाहिर काम कम देखिने भए पनि बाहिरी क्षेत्रमा काम भइरहेको छ ।”
Posted in बिकास र पुर्बाधार
Prevपिठ्युँमा बच्चा बोकेर ड्युटी गर्ने ट्राफिक जोडीको प्रेम कहानी– सडकमा सिट्ठी फुक्दाफुक्दै लभ !
Nextचियापान,अतिथि सत्कार खर्चबापत् मेयरलाई मासिक मात्र २० हजार ।
हेलिकप्टरमा जानेभन्दा आत्मविश्वासले निको हुने धेरै ।
हाम्रै घर तथा बारी वरिपरि पाईने अमृत समान सिस्नु ।
मन्त्री राई भन्नुहुन्छ : कोदोको र’क्सीलाई ब्रा’ण्ड बनाउने नारा लागू गर्नेछु !
खुशीको खबर : नेपालमा आज ह्वात्तै घटे को’रोना संक्र-मित ।(संख्या सहित)